Factory - Foshan Cerarock Ceramics Co., Ltd.
CERAROCK dia fikarohana sy fampivoarana, famokarana, varotra, serivisy any amin'ny iray amin'ireo orinasa maoderina seramika, miaraka amin'ny fahitana sakomi lehibe indrindra eran'izao tontolo izao, milina inkjet loko digital 3D, lafaoro ary fitaovana famokarana hafa.
Tsy misy entana alefa any amin'ny mpanjifantsika raha tsy dinihina tsara avy amin'ny CERAROCK QC Team; Tsy misy mpivarotra mifandray mivantana amin'ny mpanjifa tsy mijanona amin'ny atrikasa hahalala ny fomba famoahana & fanaraha-maso kalitao; "Ny anarako dia antoka ho anao". ------ CERAROCK
OEM & ODM nanaiky.
MOQ ho an'ny OEM: kaonty iray ho an'ny vokatra vita pirinty inkjet.
Fangatahana ho an'ny OEM: Pls dia manome ny pcs design modely tany am-boalohany na sary natao ho an'ny famolavolana avo indrindra ho anay hanandrana ireo vokatra mety indrindra aminao. Hataontsika antoka fa mahafa-po tanteraka ny santionany, ary manomboka manomboka amin'ny habetsahany izy ireo.
OHATRA: 300X600MM WALL TILE TRIED INTO 2 SURFACE:
OHATRA: 600X600MM FLOOR TILE:
Famokarana bata vita amin'ny hazo:
Fampivoarana vita amin'ny tsipika feno Boday:
Famaranana entana vita:
Famandrihana vokatra vita: